Red Hat Certification Guide - Fanaraha-maso & Fikarakarana momba ny asa | ITS Tech School
Torolàlana ho an'ny mpitsidika ny fanamarinana ny Red Hat
#1. Red Hat Engineer, Talen-draharaha sy Architect
#2. Red Hat Certified System Administrator na RHCSA
#5. Red Hat Developer sy Application Certificates Administrator
#6 .Red Hat Cloud sy Virtualization Administrator Certifications
Mpiasa miasa sy karatra momba ny Red Hat
Red Hat, anarana manintona ao amin'ny lalaon'ny IT, dia manolotra sehatra maro samihafa amin'ny alàlan'ny virtoaly, tahirin-kevitra, rahona mifototra amin'ny rafi-piaraha-miasa mivantana amin'ny raharaham-pifandraisana mivantana. Ireo mari-pankasitrahana ireo dia mihazona ny tsikera faran'izay henjana indrindra azo atao amin'ny fampiharana goavana sy samihafa.
Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny 90% amin'ireo fikambanana Fortune 500 dia mankasitraka ny fiheverana an'ity fandaharana mivelatra amin'ny open source ity. Ny fampiasana avo dia manamafy ny lanjan'ny fanamarinana Red Hat ihany koa. Ireo manam-pahaizana Red Hatena azo antoka dia notadiavina sy nokaramain'ny fikambanan'ny biby goavam-be nandritra ny segondra.
Raha toa ka nampitombo ny hafanam-ponao noho ny fisainana momba ireo fanamarinana ireo ny fampahalalam-baovao mifandraika amin'izany sy ny asa atao? Ny mpitarika antsika dia afaka manampy:
Ity sora-baventy manan-danja ity, Red Hat, dia fanambarana tokana hanatsarana ny fitantanana ny rafitra sy ny fampandrosoana mora. Ireo mari-pankasitrahana ireo dia natao hampifanaraka ny hevitry ny rafitra mpanara-maso, ny mpandrafitra, ny injeniera ary ny rafitra. Izy io koa dia mikendry ny fitantanana virtoaly izay tena ilaina amin'ny fototra fototra IT ary mandray ny mpitarika maharesy lahatra amin'ny famoahana RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Mba hampisehoana ireo mpangataka ny fahefana fara-tampony amin'ny fampiasana ny RHEL, ny fanamarinana dia mitaky fandraisana anjara mavitrika amin'ny Red Hat sy ny fomba fiasa. Ny fototra toy ny Solutions Technology Solutions dia manome toky fa ny mpanao fangatahana dia mamela ny fahatakarana an-tanana tsy ampiharina amin'ny mombamomba ny mena Red Hat.
Ny anaran'ilay marika dia manamarina ny fanamarinana ofisialy ny Red Hat raha toa ka manaisotra ny fandaharan'asa fanamarinana ny mpangataka ary mametraka ny fahatakarana ny tanana momba ny Red Hat. Ny famolavolana tonon-taolam-pandrefesana amin'ny fandinihana, dia manolo-kevitra fatratra tokoa ny fanomanana Red Hataminana.
Ho fahatanterahan'ny fahombiazan'ny fanamarinana ao amin'ny Red Hat, dia ho tapitra ny fanamarinana an'i Red Hat manam-pahaizana. Ankoatra ny fisokafan'ny be sy ny fiakaram-bola mahavariana, ianao dia hiafara amin'ny maha-olona voatokana ho an'ny vondrona Red Hat, vondrona izay fantatra amin'ny maha-izy azy manokana. Azonao atao ny manome soso-kevitry ny Red Hat Linux avy amin'ny fikambanana azo itokisana.
Ny tanjon'ireo injeniera Red Hat, ny filoha sy ny architects dia avo avo kokoa raha ampitahaina amin'ny profil hafa. Ny fijerena ny antso toy izany, ny fikambanana nifanaraka dia nahatonga ny fandrosoan'ny mari-pankasitrahana manokana natokana ho an'ireo manam-pahaizana ireo tahaka izao. Ny profesora 'Red Hat Certified' dia mety ho tafiditra ao amin'ny System Administrators, ny architects, ny Virtualization Administrators, ny Injeniera ary ny JBoss Administrator, sy ny sisa., Raha mandalo ny fanamarinana manan-danja. Ankoatra izany, ianao dia handray ny anjaranao amin'ny fiolahana ao Red Hat manampahaizana Linux sy fitsaboana kritikiana koa.
Ny soso-kevitra dia ny hanamafy ny fanatanterahana ny Administrateurs, izay afaka mitifitra an'i Red Hat tsara. Ankoatra izany, heverina fa ny hetsika voalohany mankany amin'ny maha-Red Hat Certified Engineer azy io satria zava-dehibe ny mipetraka ao amin'ny Exam RHCE. EX200, izay fanadinana xNUMX-minitra, dia takiana aminao mba handrehitra ny RHCSA.
Amin'ny fotoana tsy ahafahanao manatontosa ny Windows Administration ny asanao, ny safidy hafa dia ny Administration I (RH124) sy II (RH134). Avy eo indray, ny mpifaninana Linux dia mila mandray RH199 ie Rapid Track Course.
Tsy misy fameperana amin'ny fahalalana sy fahatsiarovana ny fahamarinana mitovy amin'izany, ny mombamomba ny Red Hat Certified Engineer na ny mari-panazarana RHCE. Izy io dia tena natao ho an'ireo mpitantana sy ireo mpitantana ny rafitra maoderina. Mba hananganana ity fanamarinana ity dia tsy maintsy manana mari-pamantarana RHCSA. Ny RHCE miomana amin'ny fiaraha-miombom-pihetseham-po dia mifanaraka tanteraka amin'ny fandaharanao ny fahaiza-manao teo aloha. Raha toa ianao ka lohan'ny Windows miaraka amin'ny fihaonana Linux, ny Red Hat System Administration I sy II dia ny safidy tsara ho anao.
Avy eo indray, ny lohany Linux / UNIX miaraka amin'ny fandraisana anjara miasa mandritra ny herintaona dia afaka mandeha ho an'ny RHCSA Rapid Track Course na RH199 ary ny Red Hat System Administration III na RH254.
Raha te hahay matematika RHCE azo antoka, dia tokony hanao amin'ny 3.5 ora Linux 7 miorina amin'ny RHCE Exam izay ny fehezan-dalàna fanadinana dia EX300. Ny fikarakarana ny labozim-pitsaboana lava azo avy amin'ny anarana azo itokisana toy ny Koenig dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny fanadinana ny fanamarinana amin'ny iray.
Ny fivoahana amin'ny fanamarinana mena sy manan-danja amin'ny Red Hat dia ny fanamarinana RHCA. Nahita azy araka ny tokony ho izy indrindra sy ny fangatahana izy io, ary matetika izy io no antsoina hoe mari-pamantarana an-tariby ao amin'ny Red Hat. Ny RHCE na ny RHCJD no zavatra tena ilaina amin'ity fanamarinana ity.
Ireo mpifaninana dia afaka mifidy amin'ireo sokajy manaraka ireo, raha handeha ho an'ny RHCA:
Nanaiky ny manam-pahaizana momba ny fampiharana JBoss Enterprise Middleware, manam-pahaizana roa ireto:
Ho an'ny Mpamorona JBoss - RHCJD
Ho an'ny JBoss Administrator - RHCJA
Ireo olona izay miasa amin'ny Java Enterprise Edition (JEE) dia afaka mandroso ny mari-pamantarana RHCJD. Ary indray, ireo olona izay manana fepetra amin'ny fampidirana sy ny fanaraha-maso ny Red Hat JBoss Enterprise Application dia afaka mandroso ny mari-pamantarana RHCJA.
Ho an'ny fanavaozana rahona, ny fikambanana dia manolotra ny mari-pamantarana Virtualization Administrator, miaraka amin'ny fanamarinana ny rahona. Ireo manam-pahaizana izay manana fahalalana mafimafy sy fahalalana mifandraika amin'ny fampiasana ny rafitra fanatanjahan-tena, ny mpampiantrano ary ireo mpitsidika mampiasa Red Hat Enterprise Virtualization dia afaka mandalo ity fanamarinana ity.
Araka ny nampahafantarinay anay fa ireo fikambanana rehetra ao Fortune 500 dia mandalo ny fandrosan'ny Red Hat sy ny fandaharam-pampianarana mivelatra, dia tsy misy fotoam-pisakafoanana ho an'ny manam-pahaizana manam-pahaizana ao Red Hat. Ireo manampahefana ao amin'ny Red Hat System sy Linux injeniera no rafitra mazoto indrindra ho an'ny mpitsabo Red Hat.
Red Hat Linux dia famolavolan-draharaham-pandrosoana ary mihamitombo hatrany ny isan'ny orinasa. Nofaranana tamin'ny fanandramana ny fampiasana ny aterineto madinika amin'ny aterineto madinika (ISCSI), rafitra fitsaboana sy rafitra fitantanana ny rafitra, ohatra ny File Transfer Protocol (FTP), injeniera iray ao amin'ny Red Hat Linux no fototry ny fikambanana. Tena mahay izy ireo handefa tolo-kevitra momba ny fanavaozana RHEL ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fikambanana dia mihevitra azy ireo ho toy ny harena voajanahary indrindra.
Amin'ity fomba ity, mifidiana androany ho an'ny fanamarinana Red Hat Linux ary ho ampahany vondrona tahaka izany.